Inteed Ka Taqaan Taariikhda George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia?
HomeAfricaInteed Ka Taqaan Taariikhda George Weah, madaxweynaha cusub ee Liberia?
George Weah waxa uu ku dhashay magaalo isku raran ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Manrovia, wuxuuse noloshiisa qayb kamid ah ku qaatay qaarada Yurub oo uu ka noqday ciyaaryahan caan ah, kadibna imika ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka Liberia.
Haddabe sidee ayuu halkan kusoo gaadhay George Weah?
Weah ayaa waxaa halkan geeyay waalidkii si uu ula noolaado ayaydii, xiligaas waalidkii waxa ay ku noolaayeen degmada Grand Kru oo ah meelaha ugu faqiirsan.
Taariikhdaas faqrinimadu ku dheehan tahay ayaa taageerayaashiisa agtooda uu kaga noqday qof halyay ah oo aad u dedaalay.
Isaga oo yar ayuu bilaabay ciyaaraha kubbadda cagta, dadaal badan oo uu sameeyay ayuu ku gaadhay heer ah in uu ka tago Clara, noloshiisana isbedel ku sameeyo.
Xitaa waxa uu dhexda kaga tagay iskuulka si uu horumar uga gaadho kubbadda cagta, go’aankaas oo ahaa mid uu ku badhaadhay, balse dhibaatooyin u keenay markii uu damcay in uu u tartamo xilka madaxtinimada.
Xiddig Kubadda Cagta Ah
Intii uu wakhtigaas ku gudo jiray, Weah waxa uu khaanadaha kabadhadiisa ka buuxsaday abaalmarino kala duwan oo ay ka mid tahay abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka ee FIFA iyo abaalmarinta Ballon d’Or sanadkii 1995-kii.
Balse waligii muu ilaawin dalkiisii hooyo, kaas oo markaas ku jiray dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 250,000 oo qof.
Weah waa muusigiiste hibo leh, wuxuuna mihnadda muusiga iyo heesaha ku noqday sanadkii 2014-kii, xiligaas oo isaga oo kaashanaya fanaaniin reer Ghana ah uu soo saaray heeso digniin u ah fiditaanka xanuunka Ebola.
Arimahaas uu sameeyey ayaa aad loo xusuustaa illaa iyo maanta.
Mar ayuu noqday danjiraha hay’adda carruurta adduunka ee UNICEF, wuxuuna ka qaybqaatay arrimaha samofalka.
Madaxweynihii hore ee Liberia Charles Taylor ayaa mar uga shakiyay in uu doonayo kursigiisa madaxnimo kadib markii uu Weah diiday in uu muraayadaha indhaha iska saaro mar ay labadoodu kulan lahaayeen.
Goolkii Ugu Dambeeyey Ee Weah
Wariyaha BBCda ee Jonathan Paye-Layleh ayaa sheegay in uu dareemay in damaca Weah ee ah goolka ugu dambeeya ee uu rabo in uu dhaliyo uu yahay in uu noqdo madaxweynaha Libera markii uu kula kulmay sanadkii 2004-tii, magaalada Manrovia.
Waxa uu xiligaas ahaa danjiraha UNICEF, shaqadiisuna waxa ay ahayd in uu ku dhiirogaliyo da’yartii dagaalamaysay in ay hubka dhigaan.
Weah ayaa markii uu saxaafadda la hadlay kadib wariyaha ku yidhi “waxaa la gaadhay xiligii dadka yaryar ee dalkan ay hormuud ka noqon lahaayeen”.
Inkasta oo aanu Weah si cad u sheegin in uu madaxnimo damacsan yahay, haddana sidii uu u hadlayay ayaa laga garan karayay waxa maankiisa ka guuxaya.
“Sidaasi darteed lamaan yaabin markii sanad kadib aan maqlay in uu Weah isu sharaxay madaxweynenimada” ayuu yidhi wariyaha BBC-da.
Balse markii uu tartan la galay haweenayda kasoo baxday jaamacadda Harvard, Ellen Johnson Sirleaf, waxaana dhacday in aqoon la’aantiisa iyo khibrad yaridiisa ay ka dhigtay in si sahlan looga guuleysto.
Sirleaf ayaa markii ay guuleysatay kadib xilka mar kale dib ugu tartantay oo guul kale ka gaadhay sidaasna wadanka laba xili doorasho ugu haysatay .
Wariyaha BBC-da waxa uu Weah ku tilmaamay nin shucuurtiisu ay hagto oo waraysiyada bixiya marka uu isagu rabo in uu saxaafadda la hadlo, balse aan inta badan ogolaanin wareysiyada marka laga doonto.
Isla sanadkaas ayuu u tartamay madaxweyne ku xigeenimada Liberia, balse kumuu guulaysanin.
Sanadkii 2016-kii ayuu ku dhawaaqay in uu markale isu sharaxayo xilka madaxtinimada, taas oo ay dadku aad u jecleysteen.
Laacibkii Xulka Nigeria ee Amokachi Oo Lukaku Barbar Dhigay George Weah